Chizvarwa chechinomwe iPod chinogona kurova musika gore rino | IPhone nhau
Iyo iPod touch ndiyo yakakanganikwa neApple, chishandiso chatichiri kukwanisa kutenga chiri muApple Chitoro pamhepo pamwe nezvitoro zvepanyama. Ichi chishandiso yekupedzisira yakavandudzwa muna Chikunguru 2015 pasina chero rudzi rwekuzivisa kubva kukambani.
Parizvino tiri muchizvarwa chechitanhatu chePod touch, iPod touch inotungamirwa neA8 processor, M8 koprocessor ine 1GB ye RAM uye maviri ekuchengetedza masimba. Zvinoenderana webhusaiti yeMacotakara, Apple inogona kunge ichishanda kuvhura yechinomwe chizvarwa iPod touch, chishandiso chinoratidzika kunge chinoramba kufa.
Sekureva kwewebhu webhusaiti, panguva yekupemberera kweCES 2019 muLas Vegas, vamwe vevatengesi vechikamu vaivepo pachiitiko ichi, vakati izvo Apple inogona kunge ichishanda pachizvarwa chechinomwe cheiyo iPod touch, chishandiso icho nhasi chinowanikwa makumi maviri nemaviri euros yeiyo 232 GB modhi uye 32 euros yeiyo 342 GB modhi.
Iyi webhusaiti zvakare inoti Apple iri kushanda iyo iPhone ine USB-C kubatanaNekudaro, mamwe masosi anoti Apple haisati yagadzirira kutora nhanho iyi, asi muchidimbu zvingave zvine musoro kana tikatarisa kuti iyo Pro Pro ya2018 yakagamuchira kubatana uku kutsva.
Icho chikonzero chekutora kubatana uku paPad Pro hachizi chimwe kunze kwe wedzera huwandu hwezvishongedzo iyo inogona kuve yakabatana nayo kuitira kuyedza kuitengesa sekunge ndiyo yakanaka kutsiva iyo laptop / komputa. Ini ndinotenda nemoyo wese hazviite kuti Apple inoda kuenderera ichigadzira iyo iPod touch, nekuti nekuda kweApple Watch, vese avo vanoda kutakura mimhanzi yavo yekurovedza muviri vanogona kuzviita nenzira yakapusa.
Uye zvakare, iyo yekuchengetera nzvimbo yeiyo iPhone iri 32 GB, kupfuura nzvimbo yakakwana kuitira kuti vashandisi vanoshandisa chishandiso ichi kutarisa mavhidhiyo akadhanilodha, vanogona kuzviita vasina kumboisa mari muchigadzirwa chakange chiine nguva yacho pamusika makore apfuura, asi izvozvi vakatotadza kunyangarika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iPod » Chizvarwa chechinomwe iPod chinogona kurova musika gore rino
Zvakanaka, uchifunga kuti iPhone inodhura kwazvo uye havazi vese vanogona kuitenga uye kana munhu achida kuti wachi yeapuro isvike pakupera kwezuva, chakanakira kungave kuve nePod yemumhanzi chete kana ndizvo zvandinofunga Ini ndaishandisa yangu mimhanzi nemitambo, kunyangwe parizvino yakanganisika, zvakare sechipo kune zvidiki zvinouya zviri nyore
Ini ndinobvumirana nahebichii, iyo iPhone inodhura uye inoshandisa bhatiri nekukurumidza kupfuura yangu yechishanu iPod iPod, uye kwete nekuti imwe iri nani kupfuura imwe, nekuda kwekuti foni inoshandiswa kune zvinhu chiuru.
Mune yangu kesi, ini ndinofarira kuve nemumhanzi wakaparadzana uye unogara kweanoda kusvika maawa gumi nemaviri ekushandisa, zvakanaka kwemaawa marefu pahofisi.
Norway inoongorora kana Tidal anga achinyepera huwandu hwayo kwemwedzi